I-ultrasound ibhekisela kumaza omsindo ngaphaya kweentlobo zokuvalelwa kwabantu, amawaka angama-20,000 okanye ngaphezulu kweesibini. Izixhobo ze-Ultrasonic zisetyenziselwa ukulinganisa umgama kunye nokujonga izinto, kodwa zihlala kwindawo yokucinga ngonyango abantu abaninzi baqhelana ne-ultrasound. I-ultrasonography, okanye i-sonography, i-useography, isetyenziselwa ukujonga izicwangciso ngaphakathi komzimba womntu, ukusuka emathanjeni ukuya kwizitho, iintambo, nemithambo yegazi, kwakunye nomntwana osemzini okhulelweyo.
I-ultrasound yenzelwe nguDkt. George Ludwig kwiNkcazo yezoNyango lwezoNyango kwiNyuvesi ngasekupheleni kwee-1940. I-physicist uJohn Wild uyaziwa ngokuba nguyise we-ultrasound yezokwelapha ukucinga izicubu ngo-1949. Ukongezelela, uDkt. Karl Theodore Dussik wase-Austria wanyathelisa iphepha lokuqala kwi-ultrasonics yezokwelapha ngo-1942, ngokusekelwe kuphando lwakhe malunga nophando lwe-ultrasound yengqondo; kunye noNjingalwazi u-Ian Donald waseScotland bathatha iteknoloji ebonakalayo kunye nezicelo ze-ultrasound kuma-1950.
Indlela i-Ultrasound isebenza ngayo
I-ultrasound isetyenziswe kwisixhobo esikhulu sezinto zokucinga. I-transducer inika amagagasi omsindo abonakaliswa emva kwimizimba kunye nezicubu, ukuvumela umfanekiso wezinto ezingaphakathi komzimba ukuba zikhishwe kwisikrini.
I-transducer ivelisa amaza omsindo ukusuka ku-1 ukuya kwe-18 megahertz. I-transducer isoloko isetyenziswe nge-gel eqhubayo ukwenzela ukuba isandi sithunyelwe emzimbeni. Amaza omsindo abonakaliswe ngumbumba wangaphakathi emzimbeni aze athabathe i-transducer ngokubuyisela.
Ezi zintsholongwane ziguqulelwa ngumshini we-ultrasound kwaye zatshintshwa zibe ngumfanekiso. Ubunzulu nobukhulu be-echo buchaza ubungakanani kunye nemilo yomfanekiso.
I-ultrasound inokuba luncedo kakhulu ngexesha lokukhulelwa. I-Ultrasound inokumisela ixesha lobubele bentsholongwane, indawo yalo efanelekileyo kwisibeleko, ukufumana intliziyo yesisu, ukuqikelela ukukhulelwa okubanzi, kwaye unokukunqanda ngesondo lomntwana.
Nangona i-imaging ye-ultrasonic ingatshintsha ukushisa kunye noxinzelelo emzimbeni, akukho nto ibonisa ukulimala kumntwana okanye umama ngokusebenzisa i-imaging. Nangona kunjalo, amaziko ezonyango zaseMerika kunye neYurophu ancenga ukucinga kwe-ultrasonic ukuba kuyenziwe kuphela xa kunesidingo sempilo.
I-10 ye-Rock One One Wonders
Isiphumo sePhulophu: Inkcazo kunye nemizekelo
Indlela yokucwangcisa ukuhlwa kweNtsapho yakho yasekhaya ekhaya le FHE
ILogo of Science of Mind